Gam akporo Marshmallow na Nougat achi na gam akporo Ngwaọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Android Marshmallow na Nougat na-achịkwa na ngwaọrụ gam akporo
Anyị na-eche ihu nke ọma n'ụzọ doro anya banyere mpekere nke nsụgharị dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ eji arụ ọrụ na gam akporo ngwaọrụ, mana ọbụlagodi na anyị na-eche ezigbo nzuzu banyere mmejuputa nsụgharị ọhụrụ ahụ ọ ka dịkwa oke ala.
Anyị anaghị ekwu maka Android Marshmallow, Nougat ma ọ bụ gam akporo Oreo kachasị ọhụrụ, anyị na-ekwu maka nkesa nke Android Lollipop na-ewere 26,3% nke òkè na ngwaọrụ niile na 13,4% ndị ka nọ na KitKat.
Mana n'agbanyeghị nke a, ọ bụghị ihe niile bụ akụkọ ọjọọ yana etu anyị sirila kwuo n'isiokwu a, usoro kachasị n'ọwa n'ọnwa Disemba a bụ Android Marshmallow na Nougat. Usoro abụọ a pụtara na nso nso a ma N'ihe banyere Nougat, anyị nwedịrị ike ịsị na ọ dị obere nke OS kachasị eji dị ka foto a dị n'okpuru na-egosi:
N'etiti usoro abụọ (Marshmallow na Nougat) ha mejupụtara ihe karịrị 50% nke sistemụ arụmọrụ ugbu a, ọkachasị 53%. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ ezigbo ozi ọma maka ndị ọrụ gam akporo na-ahụ mpekele mpekere nwayọọ nwayọọ na-enweta ala. Ma ala na-efu maka oge na gam akporo Oreo, ọhụrụ gam akporo nke gam akporo na-hụrụ naanị na Google ngwaọrụ na nke a dịrị arọ nke ukwuu n'agbanyeghị eziokwu na ngwaọrụ dakọtara na a version na-kwukwara nta nke nta.
Ihe anyị kwesịrị ime doro anya bụ na data anakọtara n’oge nke 7 ụbọchị ruo mgbe 11/12/2017 na-egosi ezigbo pasent nke ngwaọrụ ndị dị na ọhụrụ na nsụgharị nke usoro na dị ka mgbe niile ka anyị na-eche ya na-abata ka ndị ọzọ. Maka ugbu a ọ bụ ozi ọma mana n'echiche a gam akporo enweghị ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ya iOS, yabụ na anyị nwere olile anya na Google, ndị ọrụ na ụdị nke smartphones ndị na-eji gam akporo ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » Android Marshmallow na Nougat na-achịkwa na ngwaọrụ gam akporo
Oku nke Ọrụ: WW2 n'elu ahịa egwuregwu vidio na November
Kwadebe ọ dịkarịa ala $ 5000 ịzụta iMac Pro